» TOOS: Waqtiga la bilaabayo Doorashada iyo Xogtii Ugu Dambeysay…[Maxaa isbadalay?]Badweyntimes.com
TOOS: Waqtiga la bilaabayo Doorashada iyo Xogtii Ugu Dambeysay…[Maxaa isbadalay?]
Wararkii Ugu Dambeeyay ayaa sheegaya in heer sare uu marayo diyaar garowga Doorashada iyo Ololaha xoogan ee socda balse warar kala duwan ayaa kasoo baxaya xiliga la bilaabayo doorashada iyadoo shabakada Badweyn.com si Toos ah aad kala socon doontaan wararka doorashada.
Wariyaha Badweyn.com oo ku sugan Xaruunta Doorashada ayaa soo sheegaya in xubno ka tirsan Guddiga Doorashada ay u sheegeen in doorashada si toos ah loo bilaabi doono 11:00 ilaa 12:00 Balse wax walba waa ay isbadali karaan.
Bixinta laaluushkii u badnaa Abid iyo Musuq Maasuq ayaa la soo sheegayaa in uu hareeyay Dorashada Madaxweyanah waxaana meel halis ah hadda Mareysa arrinta doorashada lacag ku dhow Boqol kun oo Doolar ayaa uu marayaa Codadka xildhibanada.
Guddiga La dagaalanka Musuq Maasuqa Doorashada Madaxweyanah Soomaaliya ayaa shalay soo saaray dhowr qodob oo lagula dagaalami doono Musuqa Doorashada.
Jawiga ayaana saakay ah Mid ka duwan sidii ay horey ahaan jirtay waxaana dadka saakay ay u dhegtaagayaan Natiijada Doorashada Madaxweyanha ee Maanta ka dhaceysa Muqdisho.
Hoolka Doorashad Afasiyooni ee Maanta ay ka dhaceyso Doorashada Tiro ahaan waxaa uu qaadaa 600 oo qof :-
Dadka loo qorsheeyay Hoolka ayaa ah Sidan:
1. Tirada 2-da Aqal (275+54) = 329
3. Suxifiyiin Gudaha & Dibada = 80
« Warbixinta Ka HoreysayXOG: Xasan sheekh oo ilaalinaya Xildhibaano Codka u balan qaaday & Arin Xasaasi ah oo..
Warbixinta Xigto »DEG DEG: Raxan Xildhibaano ah oo ka Goostay Xasan sh, & Waji Cusub oo…